मोदीसँग ओलीको गोप्य सहमति ! अब रोकिएला भारतीय हस्तक्षेप ? - मोदीसँग ओलीको गोप्य सहमति ! अब रोकिएला भारतीय हस्तक्षेप ?
मोदीसँग ओलीको गोप्य सहमति ! अब रोकिएला भारतीय हस्तक्षेप ?
२०७५, १५ भदौ, 05:20:37 PM
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आश्चर्य चकित छन नेपाली, कारण हो उनको बदलिदो रुप । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपाल आएका मोदीले वाहीवाही मात्रै पाएनन । नेपालका नेतालाई भित्ता पुर्याउने गरी चर्चा र प्रशंसा बटुले ।
२०७१ सालमा मोदी काठमाडौँमा आउँदा धेरै नेपालीले भने पनि ‘मोदी जस्तो नेता हाम्रो देशमा किन जन्मेन ?’ तर उनको असली रुप र भारतीय हस्तक्षेप बुझ्न धेरै समय पर्खिनै परेन ।
त्यसको ६ महिनामै तिनै मोदीले संविधानमा चित्त नबुझाएर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाए । नाकाबन्दी मात्रै लगाएन, मधेसी पार्टीलाई उचालेर तराईमा आन्दोलनका आँधी बेहेरी मच्चाए ।
त्यसपछि लोकप्रियताभन्दा पनि नेपालका लागि अहिलेसम्मकै घाती भारतीय प्रधानमन्त्री बनेका मोदी यसबीचमा चार पटक नेपाल आइसके । तर पुरानो प्रशंसा र चर्चा पाउन त कहाँ हो कहाँ, उल्टै गाली पाउन थालेका छन ।
शुरुमा आफैले लगाएको नाकाबन्दीले गाली पाएका मोदीले अहिले काठमाडौँका नागरिकलाई दिएको सास्तीले गाली पाइरहेका छन । उसो त उनीबाट सत्तारुढ नेकपाका नेताबाहेक अरु दल र नेताहरु पनि विश्वस्त र खुशी छैनन ।
भलै ओठमा मुश्कान देखाएर हास्नु जो छ । तर यसपटक बिमस्टेकको सम्मेलनमा ओलीसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाएका मोदीले नेपालीको मन जितेको दाबी गरेका छन । विमस्टेकमा झण्डै १० बढी कार्यक्रम बनाएका मोदीले नेपालसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छन ।
अब एउटै प्रश्न छ, के मोदीले चार पटक आएर पनि प्रशंसा नपाएपछि अब भारतीय हस्तक्षेप र नेपाली राजनीतिभित्रको ठूल्दाईको आक्रमण रोक्लान ? यदि रोकेनन भने घाटा मोदीलाई मात्रै छैन । नेपालभित्र खेल्न पाउने सुरक्षित हैसियत चीनलाई जानेछ ।